Malunga nathi -Duoduo International Development Co., Ltd.
UDuoduo Uphuhliso lwaMazwe ngaMazwe i-Co, Ltd. yasekwa ngo-2013. Sigxile ekwenzeni nasekuhambiseni iintlobo ngeentlobo zeenqwelo, iitroli, iinqwelo zokuthenga, iinqwelwana ezithe tyaba-ipaneli, izithuthi ezisebenza ngegadi ezininzi kunye nolunye uthotho, ngaphezulu kwe-100 iintlobo zeemveliso. Inkampani ivelisa iimveliso ezintsha ukwanelisa iimfuno zeemarike minyaka le.
Sinesitampu sokunyathela, umgca we-welding, umgca wokugoba, umgca wokubumba inaliti, umgca wonyango womphezulu, umgca wokuhlangana, umgca wokuvavanya kunye neminye imigca yemveliso yobungcali ngoku
Siphumelele ukuthembela kunye nokuthandwa ngabathengi abaninzi ngenxa yengqibelelo elungileyo, inkonzo yobungcali kunye nolawulo lomgangatho ophezulu. Injongo yethu yenkonzo yile: uyilo olukumgangatho ophezulu kunye nokwenza, ukubonakala okuhle, umgangatho ozinzileyo nohlala ixesha elide. Ngoku, kwi-Yiwu International Trade City, ikomkhulu lehlabathi, sineevenkile zethu ngqo kwaye sinikwe isihloko "somthengisi ophambili" kwintengiso. Sinamandla e-R & D azimeleyo kunye nenqanaba lenkonzo ebalaseleyo, bamkelekile abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba bathethathethane ngamashishini.
Siyazingca ngomgangatho kunye nokuhambelana kwemveliso kunye nenkonzo ebonelelwe kubathengi bethu kwaye silapha ukwenza amava akho okuthenga kwi-Intanethi agqwese kakhulu. Kwivenkile yethu ekwi-intanethi, kukho ukhetho olukhulu. Ngamava eminyaka emininzi kubudlelwane ngqo nomthengisi womenzi kunye nabathengi bethu, sihlala sibonisa umsebenzi wethu ukuze uzive ungcono xa uthenga apha.
Yonke iodolo iphathwa ngononophelo olukhulu ukuhlangabezana neemfuno. Siyakuqonda ukubaluleka kokuthenga kwakho, yiyo loo nto sithengisa kuphela iimveliso ezintsha, ezingavulwanga, ezingasetyenziswanga ezi-odola ngokuthe ngqo kumenzi. Abathengi bethu balindele, kwaye baya kuhlala befumana imveliso ekumgangatho ophezulu xa usenza iodolo kunye nathi. Injongo yethu kukubonelela abathengi bethu ngeemveliso ezichanekileyo ngexabiso elifanelekileyo, ezihanjiswa ngexesha.
Sineqela elinamandla lenkonzo yabathengi eligcina iso kuyo yonke inkqubo yokuthengisa. Iqela lihlala likulungele kwaye lonwabile ukukunceda, ukusombulula imbuyekezo yakho kunye nokutshintsha, kwaye umamele izikhalazo zakho. Iqela lethu lenkonzo linamathela kwisikhokelo salo.